Hanao ahoana ihany izay ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena izao? Mafanafana ratsy. Misy mitsanga-mitoetra be ihany amin’izay mety hitranga. Tsy matoky tena? Tsy matoky ny hafa… Izao iaraha-mahita izao ny finiavan’ny sasany hanakorontana. Hanao ahoana izay korontanina amin’izany? Eny, na amin’ny karazana fiandrasana kendry tohina aza, na fandranitana, na don-tandroka… Efa miharihary tsy takona afenina ny fanaratsiana, ny fanalam-baraka, ny fanenjehana… Ho tonga hatraiza?
Ny ady tsy ahi-mahatratra; ny fatra-piahiahy, mamosavy. Na izany aza, ny rariny tsy enti-mandefitra. Vato atora-pody, hono, tsy mataho-bary ho raraka. Tsy misy lehibe toy ny vato, fa rehefa tsy miteny: itaingenan’ny vorona. Inona avokoa izany rehetra izany? Tena mila fahendrena ny raharaha: fahamatorana, fitandremana, fijerena lavitra… Ndrao very amin’ny adin’akoholahy ny adin’ombalahy. Mby amin’ny hoe ny salaka latsaka, ny ronono mandroatra, ny rafozana tonga.
Inona no hovonjena aloha? Maika avokoa ny zava-drehetra amin’izao… Eo, ohatra, ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny mbola fisian’ny valanaretina covid-19, ny fahasahiranana amin’ny famatsian-drano, ny haintany sy ny kere any atsimo… Ndeha hanampy trotraka amin’ny disadisa politika izany? Na mampanahy be ihany ny fahamarinan-toerana noho ny fanakorontanana afitsoky ny sasany… Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa… hitandremana amin’izay atao.
Mba tsy hohadinoina na very sasaka amin’ny adilahy politika, ohatra, ny fampandrosoana, indrindra izay mahasahana mivantana ny fiainan’ny vahoaka ifotony. Ndrao izany no vao mainka mahampahazo vahana ny disadisa na korontana politika, sanatria. Izay matoky tena no azo itokisana. Olana ara-toekarena tsy voavaha ny olana politika? Na ho lasa disadisa sosialy tsy voalamina ny fahasahiranana ara-toekarena… Maika avokoa ny zava-drehetra? Tsy misy avela… hohararaotin’ny mpanakorontana.